ပင်မစာမျက်နှာ တောင်အမေရိကဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အာဂျင်တီးနားဘောလုံးကစားသမားများ Giovani Lo Celso ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အကြောင်းမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
LB မှနာမည်ပြောင်ဘောလုံးသမားတစ် ဦး ၏ဇာတ်လမ်းကို“ တင်ဆက်သည်။Monito“ ၎င်းသည် Giovani Lo Celso ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ မိသားစုအချက်အလက်၊ မိဘများ၊ အစောပိုင်းဘဝနှင့်အခြားထင်ရှားသောဖြစ်ရပ်များကိုအပြည့်အဝဖော်ပြခဲ့သည်။ ဘာမှမ သူဖြစ်လာသည့်အခါရန် ရေပန်းစား.
Giovani Lo Celso ရဲ့ဘဝနဲ့တိုးတက်မှု။ Image ကိုခရက်ဒစ်: Instagram ကို။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကိုသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်သိတယ် အကောင်းဆုံးပါရမီ စပါးအောက်မှာကစားသမားအပြောင်းအလဲဖြစ်လာတဲ့ကွင်းလယ်လူ ဟိုဆေးမော်ရင်ဟို။ Giovani Lo Celso ၏အတ္ထုပတ္တိကိုလူအများစုကသာအနည်းငယ်စဉ်းစားကြသည်။ နောက်ထပ် ado မပါဘဲ, ရဲ့စတင်ကြကုန်အံ့။
Giovani Lo Celso ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - မိသားစုနောက်ခံနဲ့အစောပိုင်းဘဝ
ကွင်းလယ်လူ Giovani Lo Celso ၁၉၉၆ ခုနှစ်Aprilပြီလ ၉ ရက်တွင်အာဂျင်တီးနားရှိ Rosario မြို့၌မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည်သူ့အမေ Sandra နှင့်သူ၏ဖခင် Juan Lo Celso မှမွေးဖွားသောကလေးလေးယောက်တွင်တတိယမြောက်ဖြစ်သည်။
Giovani Lo Celso သည်အနည်းငယ်သာသိသောမိဘများမှမွေးဖွားခဲ့သည်။ Image Credits: Instagram နှင့် PxHere ။
Giovani သည်အီတလီမိသားစုမှဆင်းသက်လာသောအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားဖြစ်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ သူသည် Rosario ရှိ Sarmiento ရပ်ကွက်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးသူ၏ညီငယ် Francesco နှင့်အစ်မနှစ်ယောက်ဖြစ်သော Luciana & Agustina တို့နှင့်အတူကြီးပြင်းလာသည့်ပျော်စရာကောင်းသောကလေးဘဝရှိခဲ့သည်။
ငယ်ရွယ်သော Giovani သည်သူ၏ညီငယ် Francesco နှင့်အခြားသူနှစ် ဦး နှင့်အတူပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောကလေးဘဝရှိခဲ့သည်။ Image Credit: Instagram ။
Sarmiento ရပ်ကွက်ကလူလတ်တန်းစားမိသားစုနောက်ခံကြီးပြင်းလာတာကြောင့် Giovani ဟာဘောလုံးဝါသနာအိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ Giovani နေတဲ့အိမ်ဟာဘောလုံးကွင်းကနေ ၅ မိုင်လောက်အကွာမှာပဲ။ Giovani ဟာသူ့အစ်ကို Francesco နဲ့ဘောလုံးကစားဖို့သူ့မှာကြီးမားတဲ့ကားဂိုဒေါင်တစ်ခုရှိတယ်။
Giovani Lo Celso ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် Buildup
ကွင်းလယ်ဗိုလ်ချုပ်များကဲ့သို့ပင် Giovani သည်လူငယ်ဘောလုံးအသင်းများတွင်အပြိုင်အဆိုင်ဘောလုံးကစားခြင်း၌သူ၏ပထမဆုံးခြေလှမ်းများကိုလှမ်းခဲ့ပြီးလူငယ်ဘ ၀ ကိုစတင်ရန်မည်သည့်အသင်းနှင့်လိဂ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမဖော်ထုတ်မီ၊
လူငယ်အသင်းများတွင် San Jose ဖြစ်သည်။ ဒေသခံကလပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Giovani ၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုသည်အာဂျင်တီးနား၏ကျော်ကြားသောAtlética Jorge Griffa အကယ်ဒမီတွင် ၂ နှစ်တာလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွင်မပါဝင်မီစတင်ခဲ့သည်။
သူဟာငယ်စဉ်ကလပ်ကလပ်တွေအတွက်ကစားခဲ့ပါတယ်။ Image Credit: Instagram ။
Giovani Lo Celso ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
Giovani သည်ငယ်ရွယ်စဉ်ဘဝကိုစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ချိန်တွင်သူသည်အင်္ဂလိပ်အသင်းဖြစ်သော Everton အပါအ ၀ င်ထိပ်တန်းအသင်းများထံမှကမ်းလှမ်းမှုများကိုရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်ရှိကလပ်အသင်း Rosario Central ၌သူ၏ကလေးဘဝအိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကတိက ၀ တ်ပြုခဲ့သည်။
Rosario Central အတွက်ကစားခြင်းသည်သူသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကိုင်တွယ်ထားပြီး၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်မျှော်လင့်သောအိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Image Credit: Instagram ။
Rosario Central တွင်ရှိစဉ် Giovani သည်ကလပ်ရာထူးများသို့တက်စဉ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ရင့်ကျက်မှုတို့တွင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိခဲ့သည်။ PSG အသင်းသည် Giovani ကိုလအနည်းငယ်အကြာကြည့်ရှုခဲ့ပြီး Rosario Central အတွက်သူ၏ပွဲ ဦး ထွက်ပွဲ (၂၀၁၅/၂၀၁၆) အပြီးတွင်ဘောလုံးကစားကွင်းကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
Giovani Lo Celso ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - Fame ပုံပြင်ရန်လမ်း
Giovani က PSG အသင်းသို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးမကြာမီတွင်သူမကစားနိုင်ခဲ့ပါ။ သူသည် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ရာသီအတွက်ပထမဆုံးအသင်းအတွေ့အကြုံရရန်သူ့ကို Rosario Central သို့ပြန်လည်ငှားရမ်းခဲ့သည်။ PSG အသင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်သန်း (၄၀) ဖြင့်ခေါ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားနေ Daniely Alves, Adrien Rabiot, Draxler နှင့် ကာဗာနီ အဆိုပါ 2018/2019 ရာသီကာလအတွင်း။
မိမိအချေးသဘောတူညီချက်ပြီးစီးပြီးနောက်, ကွင်းလယ်လူ Rosario ဗဟိုနှုတ်ဆက်နှုတ်ဆက်နှင့်သာ။ ကြီးမြတ်အထွon်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ Image ကိုခရက်ဒစ်: Instagram ကို။
PSG သည် Giovani အတွက်အမြဲတမ်းနေရာမရှိကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်စပိန်အသင်းအား Real Betis ကိုဝယ်ယူရန်အတွက်ချေးငှားရန်ပြproblemနာမရှိပါ။ ဒါဟာရီးရဲလ် Betis အောက်မှာဖြစ်ခဲ့သည် Quique Setien Giovani သည်ပုံစံကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအကြောင်းပြချက် (ကစားပွဲအချိန်ပို) ကြောင့်အသင်းနှင့်အမြဲတမ်းသက်တမ်းတိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Giovani Lo Celso ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - Fame ပုံပြင်ရန်ထလော့
ရီးယဲလ်ဘက်စ်နှင့်ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်တိုက်စစ်တွင်ဂျိုဗန်နီသည်ဂိုးသွင်းယူသည့်အဆိပ်ပြင်းသပိတ်မှောက်ခြင်းဖြင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ ထိုတိုးတက်မှုသည်အင်္ဂလိပ်ချန်ပီယံ Tottenham Hotspur ကိုရာသီရှည်ချေးငွေဖြင့်လက်မှတ်ထိုးရန် ဦး ဆောင်စေသည်။ သို့သော်အာဂျင်တီးနားအသင်းသည်ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းတွင်ရှိစဉ်ကတင်ပါးဆုံရိုးဒဏ်ရာကြောင့်သူသည်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ ဂျိုဗန်နီသည်သူ၏နိုင်ငံသားဖြစ်သူကလပ်တွင်နေရာတစ်ခုရရန်ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်သည် Mauricio Pochettino အတူအစားထိုးခဲ့သည် ဟိုဆေးမော်ရင်ဟို.
ယူရိုပါလိဂ်ချန်ပီယံလိဂ်၌ Red Star Belgrade ကိုအနိုင်ယူပြီး ၄ ဂိုးဂိုးမရှိဖြင့်ဂိုးသမားသည်သူ၏မန်နေဂျာအသစ်ရှေ့တွင်မျက်နှာသာရရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဖာဂူဆန်အနေဖြင့်ဖာဒီနန်ကို ၂-၁ ဂိုးဖြင့်အနိုင်ရရှိပြီးအဖွင့်ဂိုးကိုသွင်းယူပေးခဲ့ပြီးစပါးအသင်း၏ကွင်းလယ်ကစားသမားအဖြစ်သူ၏ရပ်တည်မှုကိုမကြာမီတွင်ပင်သူကပြသခဲ့သည်။
သူသည်စပါးအသင်း၏တိုက်စစ်မှူးတစ် ဦး အနေဖြင့်သူ၏အဆင့်အတန်းကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်အဓိကရည်မှန်းချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးနောက်တွင်သူ့ကိုဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ Image Credit: TheTelegraph ။
သူနှင့်ကွင်းလယ်လူအဖော်များကိုမတွေ့မှီအချိန်သည်ကိစ္စသာဖြစ်သည်။ ဟယ်ရီစှပွေခွငျး, Tanguy Ndombele, ဒိလီမဟာမိတ်များ နှင့် Gedson Fernandes စပါးကိုလာမည့်အကြီးအအဆင့်ကိုရွှေ့။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့, သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်.
Giovani Lo Celso ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - relationship ဘဝကအချက်အလက်
Giovani Lo Celso ၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဘဝမှသူ၏ရည်းစား Magui Alcacer ကလှပသောချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ သူမသည် Giovani ၏ရည်းစားမဟုတ်ရုံသာမကရေကူးဝတ်စုံမော်ဒယ်၊
Giovani သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက Rosario တွင်တွေ့ဆုံခဲ့သောသူ၏ရည်းစားကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးချစ်ခင်မြတ်နိုးသည်မှာအံ့သြစရာကောင်းလှသည်။ Giovani နှင့် Magui ၏ဆက်နွယ်မှုသည်အချိန်ကုန်နေသောအချစ်ငှက်များတွင်သား (သမီး) သို့မဟုတ်သမီး (များ) ကိုလက်မထပ်ဘဲမွေးဖွားလာခြင်းမရှိသေးပါ။
Giovani Lo Celso Girlfriend Magui Alcacer နဲ့တွေ့ဆုံပါ။ Image Credit: Instagram ။
Giovani Lo Celso ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - မိသားစုဘဝအချက်အလက်
Giovani Lo Celso မိသားစုဘ ၀ သို့ပြောင်းရွေ့သူသည်မိဘများနှင့်မောင်နှမများကိုထောက်ပံ့ရန်ကောင်းချီးပေးခဲ့သည်။ Giovani ရဲ့မိသားစု ၀ င်တွေအကြောင်းကိုသူ့မိဘတွေနဲ့စတာကိုမင်းတို့သိပါတယ်
Giovani Lo Celso ရဲ့ဖခင်နှင့်မိခင်အကြောင်း Juan Lo Celso နှင့် Sandra တို့သည်ကွင်းလယ်လူ၏အမေနှင့်ဖခင်များဖြစ်သည်။ Giovani ၏အလုံးစုံတိုးတက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုကိုသူတို့၏အကြီးအကျယ်ပံ့ပိုးမှုများသည်သူ၏မှတ်ဉာဏ်ထဲတွင်အမြဲရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့်ကွင်းလယ်လူဗိုလ်ချုပ်ကြီးသည်အဖေအားလေ့ကျင့်ရေးသို့ခေါ်ဆောင်လာသည့်အတွက်ဂုဏ်ယူရန်အမြဲတမ်းမြန်ဆန်သည်။ သူ့အမေကသူ့ကိုအမြဲတမ်းနှိမ့်ချဖို့နဲ့ဘောလုံးကိုအာရုံစိုက်ဖို့အမြဲသတိပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းသူမမေ့ဘူး။ Giovani ၏မိဘများသည်စာရေးသားချိန်၌သူနှင့်ရင်းနှီးသောရင်းနှီးမှုရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးသူသည်အကောင်းဆုံးဘဝမှရရှိရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။
Giovani Lo Celso ၏မောင်နှမများအကြောင်း - ကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Giovani Lo Celso သည်သူ၏မိဘများမွေးဖွားလာသည့်တတိယမြောက်ကလေးဖြစ်သည်။ သူ၌လူစီယာနာနှင့်အဂတ်စတီနာတို့ဖြစ်ကြောင်းခွဲခြားသိမြင်နိုင်သောအစ်မနှစ်ယောက်နှင့်ညီငယ်ဖရန့်စကိုတို့ရေးသားသောစာတွင် Rosario Central အတွက်ကွင်းလယ်လူအဖြစ်ကစားသည်။ မောင်နှမ ၄ ယောက်စလုံးအတူတကွကြီးပြင်းနေစဉ်ပျော်စရာကောင်းသောအစောပိုင်းဘဝတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့အချင်းချင်းလည်းချစ်ခင်၊ Giovani Lo Celso ၏မိဘများသည်အောက်ပါကလေးများကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။
LR မှ: Francesco, Giovani, Luciana, Agustina နှင့် Giovani Image ကိုခရက်ဒစ်: Instagram ကို။
Giovani Lo Celso ရဲ့ဆွေမျိုးတွေအကြောင်း Giovani Lo Celso ၏မိသားစုဘ ၀ ကိုတိုးချဲ့ခြင်းသည်သူ၏မျိုးရိုးနှင့်မိသားစုအရင်းအမြစ်များအထူးသဖြင့်သူ၏အဖေဘက်ကအဘိုးအဘွားများနှင့်မိခင်အဖိုးနှင့်အဖွားတို့၏မှတ်တမ်းများမရှိပါ။ Giovani ၏ ဦး လေးများ၊ အဒေါ်များနှင့်ဝမ်းကွဲများသည်ထိုအတ္ထုပ္ပတ္တိများရေးသားစဉ်ကသူ၏တူနှင့်တူမများကိုဖော်ထုတ်ရန်ကျန်ရှိနေသေးသည်။
Giovani Lo Celso ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကအချက်အလက်
Giovani Lo Celso ကဘယ်သူလဲ။ Giovani Lo Celso ကိုဘာကိုနှိပ်သည်ကိုသင်စဉ်းစားဖူးပါသလား။ သငျသညျမိမိအ Off- စေးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အနှစ်သာရတွက်ဆဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပြီဘယ်လောက်? ဤနေရာ၌ကစားသူပြုလုပ်သူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည့်စာသားများအားသင်ကြည့်ရှုရန်သင့်တော်သောနေရာတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ သင့်အားသူ၏ပြည့်စုံသောရုပ်ပုံလွှာကိုသင်ရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။
စတင်ရန် Giovani ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသည် Aries Zodiac နိမိတ်လက္ခဏာ၏လမ်းညွှန်မှုကိုခံယူသူများ၏ပြသထားသောစရိုက်များကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ သူသည်ရည်မှန်းချက်ပြည့်ဝသော၊ လွယ်ကူသော၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆိုင်ရာအသိဉာဏ်ရှိသူ၊ စွမ်းအင်ပြည့်ဝသူဖြစ်ပြီးသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖေါ်ပြသရန်မသင့်ပါ။ ကွင်းလယ်ကစားသမား၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်ဝါသနာများမှာရေကူးခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်း၊ သူ့မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
သူငယ်ချင်းများနှင့်ကောင်းသောအချိန်သည်ကွင်းလယ်လူကိုများစွာဆိုလိုသည်။ Image Credit: Instagram ။
Giovani Lo Celso ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်အလက်
Giovani Lo Celso ၏ငွေရှာခြင်းနှင့်သုံးစွဲခြင်းအလေ့အထများနှင့် ပတ်သက်၍ သူသည်ထိပ်တန်းပျံသန်းမှုဘောလုံးကစားခြင်းအတွက်လစာနှင့်လုပ်အားခများများစွာတွင်ကောင်းစွာဝင်ငွေရရှိခဲ့စဉ်ထောက်ခံချက်များကဤဇီဝရေးသားချိန်၌ပြန်လည်သုံးသပ်နေဆဲဖြစ်သောသူ၏အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။
ကွင်းလယ်လူသည်သူနေထိုင်သောအိမ်နှင့်တိုက်ခန်း၏တန်ဖိုးကိုမသိရသေးသော်လည်းသူ၏ကောလာဟလသတင်းများနှင့်ပတ်သက်သောသံသယများကိုအတည်ပြုနိုင်သည့်ကားမောင်းနေသည့်ကားများကိုမတွေ့ရပါ။ သို့သော်သူသည် Disneyland Park အပါအ ၀ င်စျေးကြီးသည့်အပန်းဖြေစခန်းများတွင်အားလပ်ရက်များဖြုန်းတီးရန်အကြောင်းရှိသည်။
Giovani Lo Celso- ဒစ္စနေးလန်ပန်းခြံမှာအချိန်ကုန်ခံတာကိုဘယ်သူမြင်တာလဲဆိုတာကြည့်ပါ။ Image Credit: Instagram ။
Giovani Lo Celso ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - မရေမတွက်အချက်အလက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Giovani Lo Celso ၏ကလေးဘဝဇာတ်လမ်းနှင့်အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုဖျောက်။ ဤတွင်သူနှင့် ပတ်သက်၍ မရေမတွက်နိုင်သောအချက်အလက်များအနည်းငယ်သာရှိသည်။
Giovani ၏ရည်မှန်းချက်ပွဲတော်အကြောင်း ကဲ့သို့ ဘေးလ် & ဂါဗြေလညျယရှေု, Giovani သည်လက်ချောင်း ၅ ချောင်းဖြင့်လက်ျာလက်ကိုမြှောက်ပေးခြင်းဖြင့်သူ၏ပန်းတိုင်များကိုထူးခြားစွာဂုဏ်ပြုသည်။ ကွင်းလယ်ကစားသမားမှာရှိနေစဉ်လက်ဝဲလက်ကိုဆန့ ်၍ လက်ျာလက်ကိုညွှန်ပြသည်။ ကွင်းလယ်လူ၏အဆိုအရလက်ချောင်းခြောက်ချောင်းလုံးသည်သူ့မိသားစုအပါအ ၀ င်သူ့မိသားစု ၀ င်တိုင်းအားချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြသည်။
သင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ထူးခြားသောရည်မှန်းချက်အထိမ်းအမှတ်ပွဲကျင်းပခြင်းကိုသင်တွေ့မြင်ရတိုင်းအချိန်မဟုတ်ပါ။ Image Credit: Instagram ။
Giovani ၏အီတလီနိုင်ငံသားအကြောင်း ကွင်းလယ်ကစားသမားသည်အီတလီလူမျိုးတို့၏အမွေအနှစ်များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်နိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးအီတလီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်သည်။ Giovani ကတော့ကြိုက်တယ် Papu Gomez အာဂျင်တီးနားကိုကိုယ်စားပြုဖို့ရွေးချယ်။
ဖီဖာအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - Giovani Lo Celso ဆိုတာမင်းသိလား ဖီဖာ 20 ယေဘုယျအဆင့်သတ်မှတ်ချက် ၈၃ အဆင့်သည်သူသည်ထိပ်တန်းပျံသန်းမှုဘောလုံးကစားစဉ်ကတည်းကသူ၏ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့သည့်အလုပ်ပမာဏကိုကောင်းစွာပြောနိုင်သလား။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာသူ၌အလားအလာရှိသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက် ၈၉ အထိရှိသည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်မည်သည့်နေရာတွင်မှမဟုတ်ဘဲတက်မည်ဟူသောအချက်ကိုလည်းငြင်းဆိုခြင်းမရှိပါ။
Giovani Lo Celso ရဲ့ထိပ်တန်းပျံသန်းမှုဘောလုံးကွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကောင်းကောင်းပြောနိုင်တဲ့အထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့အဆင့်မြင့်အဆင့်တွေကိုကြည့်ပါ Image ကို Credit: Youtube ကို။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အရက်သောက်: Giovani Lo Celso သည်ဤဇီဝစာရေးသားစဉ်ကဆေးလိပ်မသောက်ခဲ့ပါ။ သို့သော်သူသည်အထူးအခါသမယများတွင်အသင်းဖော်များ၊ မိသားစုများ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်တာဝန်သိစွာသောက်ခဲ့သည်။
တက်တူး: ၅ ပေ၊ ၁၀ လက်မအမြင့်ရှိကွင်းလယ်ကစားသမားသည်စာရေးချိန်တွင်တက်တူးမပါသည့်ငယ်ရွယ်သောဘောလုံးသမားများ၏လိမ္မော်တွင်ကစားသည်။ သူသည်မိမိကိုယ်ကိုကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်ထူထောင်သောအခါသူသည်နောင်အနာဂတ်တွင်ခန္ဓာကိုယ်အနုပညာရရန်အစီအစဉ်များကိုဖျက်စီးနိုင်သည်။
Giovani Lo Celso ရဲ့တက်တူးထိုးတာကိုတွေ့ဖူးလား။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့နေရာမှာငါတို့ကိုအသိပေးပါ။ Image Credit: Instagram ။
ဘာသာတရား: Giovani Lo Celso ၏မိဘများကသူသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ၎င်းကိုသူ၏မိခင်စန်ဒရာနှင့်မောင်နှမများဖြစ်သောသြဂတ်စတင်းနှင့်ဖရန့်စကိုတို့ပိုင်ဆိုင်သည်။ သို့သော်သူသည်လူမှုရေးမီဒီယာများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများတွင်ဘာသာရေးတွင်မပါ ၀ င်သောကြောင့်ဂျီနိုနီသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုကျင့်သုံးသည်မဟုတ်သည်ကိုမူမသိရသေးပါ။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ငါတို့ရဲ့ Giovani Lo Celso ကလေးဘဝဇာတ်လမ်း Plus မဖော်ပြထားသောအတ္ထုပ္ပတ္တိများကိုဖတ်ရှုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ At LifeBogger, ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုအတွက်ကြိုးစားသည်။ မမှန်ကန်သောအရာတစ်ခုခုကိုသင်တွေ့ရှိပါကအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေပါ။ သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားလေးစားမည်။
ဂွန်ဇာလိုဟီဂူအင်းကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်